maleeshiyada dowlada ridada oo dhac iyo boob u gaystay dadka rakaakbka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho | Halganka Online
maleeshiyada dowlada ridada oo dhac iyo boob u gaystay dadka rakaakbka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho
Posted on Abriil 29, 2010 by halganka
Maleeshiyo ka Tirsan Xukuumada ridada ayaa Saaka Dhac u geystay Gadiid Rakaaba oo ay saaraayeen Dad shacab ah oo garab rarata oo marayey inta u dhexeysa kuliyada Jaala Siyaad iyo Ex-control Afgooye, iyadoona dhanka kale ay Saaka Maalintii labaad Xirantahay Wadada Isku xirta Suuqa Bakaaraha iyo Isgoska Dabka.
Gaadiidka iyo Rakaabka Dhaca loo geystay ayaa la sheegay in laga qaatay wixii ay heysteen Lacago, Mobilo iyo agab kale Xili ay saaka Waabarigii marayeen Wadada kaliya ee xiligan leysaga Talaabo labada Dhinac ee Magaaladu u qeybsantahay ee ay kala joogaan Xoogaga Mujaahidiinta iyo xukuumada ridada oo kaashaneysa saliibiyiinta AMISOM oo Dhibaato Ku Haaya shacabka masaakiinta ah oo u soo adeega doonta suuqa bakaaraha magaalada muqdisho.
Rakaabkii dhibaatada loo gaystay ayaa u waramay Halganka.wordpress.com in dhibaato ay u gyasteen maleeshiyaada dowlada ridada waliba raga qaarkiisa ay jirdileen wixii agab ahaa ay wateena laga qaatay dhibanihii ayaa intaas ku daray inuu indhihiisa ku arkay ugu yaraan 5 Bas ama somalida u taqaano hoomey oo ay Rakaabku saaraayeen ayey Dhaceen maleeshiyada Dowlada kadib markii ay u galeen halka looyaqaano Haanta dheer oo ay intabadan maleeshiyada ku dhacaan Gaadiidka iyo Dadka Saaran.
sikastaba ha ahaatee waxaa waxaa caado u ah maleeshyada akhlaaq darada lagu soo tababaray wadamada gaalada ee ugandha ,itoobiya ayaan u aaba yeelin shacabkooda oo dhibaato 20kii sano ee la soo dhaafay dagaal oogayaashi ay shaqeenaayeen dhibaato ku haaye, waxaa mujaahidiinta looga fadhiyaa inay ka dulqaadaan mooryaantaas dhibaatada ay ku hayaan shacabka muslimiinta.
« SIDEE LOO GALAY XABAALIHII MAQAAL XIISA BADAN ? by Khadar C/laahi Badeed Xarakatu shabaabul mujaahidiin ayaa maanta cutubyo ka tirsan mujaahidiinta Tabobar Ugu soo xiray masjidka Nasrudiin ee Magaalada Muqdisho »